> Resource > Android Manager> Top 5 Android App
Tababaraha app android waa codsi guud nidaamsan meesha user ee Android arki kartaa, rakibi, barnaamijyadooda uninstall in kubad hal. Waa aalad in aad muujin kartid barnaamijyadooda socda ee asalka ah, dilaan socda Chine, iyo waqti isku mid ah u maamulaan barnaamijyadooda aad.
Si fudud waxaad ka heli kartaa maamulayaasha App fara badan ee telefoonada Android ama kiniin ah ee internetka. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay dhab ahaantii hawl aad u dhib iyo waqti lumis. Waxaad u baahan tahay si ay u qabtaan raadinta ah oo qoto dheer si aad u hesho tababare xirfad app in la kulmay doorashooyinkaaga iyo shuruudaha. Nasiib wanaag, waxaan la soo ururiyay oo ku qoran hoos ugu fiican 5 Android App Maareeyayaasha, taas oo aad ku badbaadin karto waqti iyo dooran iyaga ka.
Mobogenie waa tababare weyn Android App oo kaa caawin kara in aad maamuli barnaamijyadooda ka computer at qiimaha xogta lahayn. Waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijyadooda culus oo lacag la'aan ah (xitaa 80-MB) iyo kulan oo ay ku rakibi ay Android xawaare cajiib ah.
, Hab degdeg ah New u degsado iyo ku rakibidda Apps culus.
Download app 80-MB ah qiimaha xogta lacag la'aan ah.
Dooro Chine oo lacag la'aan ah oo kulan ka dukaanka oo iyaga loo soo dajiyo rogtid oo aad telefoonka.
AirDroid waa qalab weyn oo loogu maareeyo barnaamijyadooda aad Android ka Web your computer ee. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad waayo-aragnimo ay baarayaan ka Chine oo hore u jiray iyo kuwa cusub oo ay ogaadeen la waddo cusub oo xiiso leh, ka shaashadda kombuyuutarka aad cable USB aan. Sidoo kale, waxaa qoreysa rakibo oo degdeg ah iyo dhoofinta apk.
Maamul Apps ka your computer cable USB aan.
Maamul barnaamijyadooda ku rakiban iyo ogaato kuwa cusub.
App Quike rakibaadda iyo dhoofinta apk.
Samsung Kies waa codsi ah oo inta badan loo isticmaalaa aad, ee isticmaala Samsung for. Si ka duwan Tababaraha app Android kale, Samsung Kies ma laha suuqa kala ah maamulka app gaar ah oo aad ka arki kartaa info app, rakibi ama uninstall barnaamijyadooda. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay bixisaa dukaan hodan app halkaas oo aad ka raadin kartaa oo kala soo bixi barnaamijyadooda aad ugu jeceshahay.
Doondoon, oo kala soo bixi app kasta oo si deg deg ah dukaanka.
MoboRobo waa tababare kale app for Android. Waxa kaliya ma ahan oggolaanaysa in aad maamulato barnaamijyadooda nidaamka, barnaamijyadooda user kuwaas oo lagala soo bixi oo lagu rakibay, laakiin siinayaa fursad si aad u cusboonaysiiso barnaamijyadooda la version a cusub aad. Waxaase yaab leh, waxa ay si toos ah u ogaadaa file app kombiyuutarka ah, caawinaya in aad si deg deg ah u hesho oo iyaga loo soo dajiyo. Intaa waxaa dheer, waxa uu dhisay-in khayraadka web oo aad ka raadin kartaa oo kala soo bixi barnaamijyadooda qabow iyo ciyaaraha.
Ku rakib, uninstall ama dhoofinta barnaamijyadooda aad ku rakibtay.
Chine nidaamka uninstall qalabka rujin Android.
U ogolow si aad u cusboonaysiiso barnaamijyadooda la version a cusub.
Ha sii wadaysaan kulamada iyo barnaamijyadooda iyo iyaga rakibi ka khayraadka web dhisay-in.
Wondershare Mobile Tag for Android waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican app Android u barnaamijyadooda Android oo kiniin si buuxda u maamula iyo maaraynta ka raaxada ee shaashadda PC weyn. Waxa aad dhakhso u raadin kartaa, download iyo rakibi barnaamijyadooda cusub. Waxaa qoreysa hab fiican qabanqaabada barnaamijyadooda iyo iyaga uninstalling haddii loo baahdo. Oo markii ay timaado ilaa taageero iyo dhoofinta barnaamijyadooda, oo dhan waxaa la samayn karaa iyadoo qasabno yar.
Raadi, dejisan iyo rakibi barnaamijyadooda.
Abaabulaan Chine ee hadda jira.
Uninstall barnaamijyadooda aan loo baahnayn in yaalla.
Dib xarunta u ah Dalka Chine muhiim ah.
Diritaanka barnaamijyadooda qiimo leh kaarka SD oo bilaash ah ilaa meelaha.
Wadaagista barnaamijyadooda saaxiibada iyo hubiso faahfaahinta.
Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan u Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .